Haweenay Dil la yaab leh ka geysatay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay qaabkii ay u fulisay dilka | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Haweenay Dil la yaab leh ka geysatay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay...
Haweenay Dil la yaab leh ka geysatay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay qaabkii ay u fulisay dilka
Muqdisho (Halqaran.com) – Saldhiga Degmada Dharkeenley ee Gobolkaan Banaadir ayaa galabtii Jimcaha waxaa ka dhacday fal dil ah oo ay gaysatay Haweenay shacab ah, kadib markii qorigiisa ay ku dishay Askari ka tirsanaay Saldhiga Dharkeenley.
Falka dilka ah ayaa dhacay, kadib markii Haweenaydan ay ugu timid Askariga isaga oo fadhiya ilinka hore ee Saldhiga halkaasi uu waardiye ka haayay.
Haweenayda ayaa soo qabsatay qorigii uu lahaay Askariga, kadibna xabad ayeey ku dhufatay Askariga oo sidaasi ay nafta kaga baxday.
Askartii ku sugnayd Saldhiga oo ku soo baxay dhawaaqa xabada ayaa arkay maydka Askariga iyo Haweenaydan oo qoriga haysata, waxaana suuragashay ugu dambeyn in gacanta lagu dhigo Haweenaydii falka dilka gaysatay.
Illaa hadda si sax ah looma ogo waxa dhexmaray Haweenaydaasi iyo Askariga ay dishay, balse Haweenayda ayaa hadda ku xiran Saldhiga Degmada Dharkeenley oo ah meesha dilka ay ka gaysstay.
Saraakiisha Booliska ayaa sheegay in Sabtida maanta baaris lagu bilaabi doono, haweenayda falka dilka ah u gaysatay Askariga ka tirsanaay Saldhig Galbeed ee degmada Dharkeenley.
dhacdo la yaab leh
haweeney shacab ah oo Askari dishay
Saldhig Galbeed ee Dharkiinley
Saldhiga Degmada Dharkeenley